Iindaba -Ivili laseRuiyi linyanzelekile ukuba lilwe nesi sifo
Irhasi leRuiyi linoxanduva lokulwa imeko yobhubhane
Ngo-2020, kwaqhambuka inoveli ye-coronavirus pneumonia kwilizwe liphela. Kumlo wokulwa ubhubhane, ityhi laseRuiyi, njengeyona nto iphambili kushishino, ebesoloko esenza uxanduva kwezentlalo. Ngokwenza izinto ezinje ngokuqalisa kwakhona kwimveliso, ukunceda amaqabane kunye nevenkile ukubuyela emsebenzini ngokukhuselekileyo, kunye nokwenza uqeqesho lokuthintela ubhubhane kwi-Intanethi, itayitela laseRuiyi livakalise ukuzimisela kwabo ukoyisa ubunzima kunye nokuzithemba ekoyiseni imeko yobhubhane nabantu bebonke. ilizwe.
Ukukhuselwa ngokugqibeleleyo kwabasebenzi befektri ukubuyela emsebenzini
Ngexesha elikhethekileyo, ukuqala kwakhona kwemveliso okungagungqiyo lilitye le-ballast ukuzinzisa uphuhliso lwentlalo noqoqosho. IVili leRuiyi lithathe inyathelo lokuthatha uxanduva kwezentlalo. Ngaphantsi kwesiseko sokwenza umsebenzi olungileyo kuthintelo kunye nokulawula ubhubhane, itayara laseRuiyi lidlale indima ekhokelayo kolu shishino kwaye liqalise ngenkuthalo umsebenzi kunye nemveliso. Inoveli coronavirus pneumonia iye yasekwa ngexesha lokuqala, ikhokhela iqela ukuba lenze isicwangciso esitsha sokuthintela iiyure ezingama-24 zepneumonia entsha, kwaye ithathe amanyathelo athile anje ngomlinganiso wobushushu kunye nokuhamba, ulawulo lokutyela kwiholo yokutyela, ukubulala iintsholongwane Iindawo zoluntu kunye neendawo zokulala, njl njl, ukwenzela ukunika abasebenzi indawo yokusebenza ekhuselekileyo kunye nokwenza iimpendulo ezimbini ezichanekileyo kulo bhubhane.
Ukuthatha abathengi njengeziko, inkonzo yokugcina ikhuseleke ngakumbi
Iivenkile zamatayara zaseRuiyi zikwaphendule kakuhle nangokungqongqo kumanyathelo okuthintela ubhubhane, kwaye umsebenzi wokuthintela ubhubhane wahlangabezana nemigangatho yokuqalisa kwakhona kurhulumente wengingqi. Ukongeza kwimisebenzi yokuthintela ubhubhane esisiseko njengokufumanisa ubushushu kunye nendawo yokubulala iintsholongwane, iivenkile ezinemiqathango nazo ziqhuba ukuphuculwa kwenkonzo, ukubonelela ngenkonzo yokubulala iintsholongwane emotweni kunye nezinto zokuthintela ubhubhane kubathengi abafika kwivenkile, banikezela ngenkonzo yendlu ngendlu kunye nokuthathwa kwindlu ngendlu kunye nokuhanjiswa kweenkonzo kubathengi abangaphazamiseki kwivenkile.
Ukuhanjiswa okuqhubekayo kwamanyathelo okhuselo ukunceda ukuthintela ubhubhane
Xa ujongene nemeko yobhubhane, uRuiyi udiniwe ubambelela kumoya wentsingiselo "wokuya phambili ungaze uyeke", ngokuthatha uxanduva kwezentlalo, wabelana ngesikhephe esinye nabantu belizwe lonke, kwaye wenza igalelo elibonakalayo ekulweni lo bhubhane. . Itayara laseRuiyi liza kuqhubeka liqwalasele inkqubela phambili yothintelo kunye nomsebenzi wolawulo, liqhubeke nokwenza igalelo emsebenzini wokulwa ubhubhane, kwaye ndikholelwe ngokuqinisekileyo ukuba ubhubhane luzokoyiswa ekugqibeleni!